Ukubuka kwechibi okujabulisayo - I-Airbnb
Ukubuka kwechibi okujabulisayo
I-i-townhouse ephelele ibungazwe ngu-Karl
U-Karl Ungumbungazi ovelele
Itholakala ngokumangalisayo ogwini olusempumalanga yeLake Maggiore e-Italy iPorto Valtravaglia. Ukubuka okungavinjelwe kwechibi nezintaba ezizungezile. Imizuzu emi-5 ukuhamba ngezinyawo ukuya echibini.
Igumbi lokuhlala elikhulu, amagumbi okulala ama-2 (anemibhede ephindwe kabili lilinye), ikhishi, igumbi lokugezela, ithala elikhulu. Ilungele abantu abangu-4, uma kudingeka abanye abangu-2 abalele kusofa egumbini lokuphumula. Indawo yokupaka siqu
Umbhede omkhulu ongu-1, Imibhede elala umuntu oyedwa engu-2, 1 usofa
4.75 · 96 okushiwo abanye
Ukuthenga / Izindawo zokudlela
Itholakala eduze nendawo yokudlela ene-pizzeria, uhlu lwezincomo ezengeziwe lungatholakala endlini.
Izitolo ezincane zitholakala ebangeni elingamakhilomitha ama-2, imakethe enkulu yamasonto onke nezitolo ezinkulu ziseLuino ngebanga elingamakhilomitha ayi-5. ISupermarket eyodwa eLuino ivulwa ngo-24h/7d.
I-Milan ingamahora angu-1.5 ngemoto, kuyashesha futhi kulula ukufika lapho ngesitimela.
sicela usithumelele i-imeyili yakho, siyayidinga ukuze sikuthumelele iphasela lethu Lolwazi futhi sikwazise ngendlela yokuthola indlu kanye nezikhiye.
Ngaphandle komhlahlandlela uzoba nenkinga ekutholeni indlu, ngoba izinhlelo zokuzulazula ngeke zikuqondise ngendlela efanele.